Chirpify: Tinye ntughari na nlekota oru mgbasa ozi gị | Martech Zone
Chirpify: Tinye ntụgharị na Nlekọta Mgbasa Ozi Gị
Wednesday, October 8, 2014 Wednesday, October 8, 2014 Douglas Karr
Chọọ na-enyere ndị ahịa aka ịrụ ọrụ na-eme ka ndị na-azụ ahịa soro na akara site na ọwa ọ bụla na mgbasa ozi mmekọrịta. Nwere ike ịrụ ọrụ ndị na-akpata omume iji nweta ndị ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta ịzụrụ, tinye nkwalite, nweta ohere maka ọdịnaya na-enweghị atụ, wdg. Lee otu ihe atụ:
Sundaybọchị Sọnde a, lelee mgbasa ozi TV ọhụrụ anyị, lelee anya maka hashtag ma gbanye mkpọ nke gị nke ụtọ ọhụrụ anyị. #abalị pic.twitter.com/ASU58SL1KX
- Oreo Kuki (@Oreo) January 24, 2014
Mgbe onye ọrụ jiri hashtag akọwapụtara iji banye na ozi ahịa, Chọọ zara ozugbo ozugbo na akara. Ha na-anakọta data (ihe ọ bụla akara ahụ chọrọ ịma, afọ, email, agba kachasị amasị) na iyi nke nwere ụdị mkpanaka mkpanaka ma jikọta ya na njikwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya na usoro CRM ụdị.
Ọ bụ ụzọ dị mma iji wuo profaịlụ ndị ahịa zuru oke ma mụta ihe ndị Fans nwere mmasị na nkwalite n'ọkwa ọ bụla. Usoro nzaghachi na-arụ ọrụ na Facebook, Twitter na Instagram. Lee ihe atụ ọzọ:
Spalding Entertainment, na-eji Chirpify maka n'ọkwá na-ebe. Na Rascal Flatts & Jason Aldean Summer Concerts, ndị na-egwu egwu na-ahụ Chirpify Ihe omume na Jumbotron, na oku iji mee ihe: Banye maka nkwalite oche! Tweet #Enter #BurnItDownTour.
Ikpo okwu Chirpify na-ege ntị maka #actiontags ndị ahụ, ma na-aza onye ọ bụla (na nnọchite nke onye na-ese ihe) nwere ozi na njikọ iji banye asọmpi ahụ. Njikọ ahụ mepee ụdị ntụgharị ekwentị anyị ebe anyị na-anakọta adreesị ozi-e ha (yana njikwa Twitter). A na - ahọrọ onye mmeri ma gwa ya ọkwa tupu ihe ahụ amalite - a kpọkwara ha (na enyi) ka ha gaa ebe obibi VIP.
Chirpify ejikọtawokwa nchịkọta iji nye ndị ahịa nsonaazụ:
Anyị na ndị ahịa na-arụ ọrụ na kwa mkpọsa na ihe na-aga n’ihu. Dịka, ụdị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha na-abịakwute anyị na usoro ahịa ha ga-achọ iji Chọọ iji rụọ ọrụ - anyị na ha na-arụ ọrụ iji hazie ikpo okwu maka mkpa ha ụfọdụ.
Tags: ihe omumechirinụzaghachi mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụn'ọkwáazụmahịa mgbasa ozintụgharị mgbasa ozi mmekọrịtamgbanwe mgbasa ozielekọta mmadụ mgbasa ozi trigakpalitenkwalite ebe mgbakọ
Otutu Mkpebi Purzụta na B2B Na-eme Tupu I Kpọtụrụ Companylọ Ọrụ Gị
Ahịa gị ọ na-ata ahụhụ site na Fragmentation, ndakpọ olileanya na enweghị nhazi?